AYAA SOMALILAND BUR-BURINAYA ?
Sunday May 12, 2019 - 21:19:40 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Waxaa Somaliland kusoo wajahan dagaalo culus oo bur-bur weyn iyo qax hordeedi kara. Dagaaladan ayaa ah qaar ay wataan dawlado waaweyn oo Maraykanku
Waxaa Somaliland kusoo wajahan dagaalo culus oo bur-bur weyn iyo qax hordeedi kara. Dagaaladan ayaa ah qaar ay wataan dawlado waaweyn oo Maraykanku ugu horeeyo, kuwaas oo salka Ku haya shirkado waaweyn oo qaatay contracts hore oo shidaalada Ku Jira Geyiga Somaliland, gaar ahaan Gobolada Barriga Somaliland, wakhtigaasna ay dawladii hore ee Siyaad Barre siisey, hadana dawladan Farmaajo contract Cusub oo sidii hore laga sii fududeeyey ugu cusbooneysiisey, sababo la xidhiidha soo celinta Somaliland, taasoo xalku yahay bur-bur siyaasadeed oo Somaliland Ku yimaad si loo diciifiyo, loona hoos dhigo Soomaaliya oon waxba gacanta ugu jirin.
Markaan taariikhdaa dib u milicssno waxaa arrintaas horey uga hadley asaga oo khayriyada ka khudbadaynaya wasiirkii arrimaha dibada ee Daahir Rayaale, Maxamed Ducaale. Waxaa Wasiirku khudbadiisii ku sheegay in Maraykanku Ku foogan yahay bur-burinta Somaliland. Wakhtigan ayaa ahaa wakhtigii doorashada Siilaanyo galeli doono. Waxaa dawladii Rayaale looga yeedhay Maraykanka, waase ka diideen, ayada oo waliba ujeedadu ahayd iney Soomaaliya la xaajoodaan oo heshiis lagu dhameeyo khilaafkii midnimada hortaagnaa.
Waxaa hadaba isla wakhtigaa Mareykan udhoofey Siilaanyo oo mucaad ah iyo Maxamed Cabdillaahi oo markii Siilaanyo doorashada heley uu umagacaabay Wsiirka arrimaha dibeda. Hadaba markii Siilaanyo doorashada heley waxaa bilaabmey wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland, waxaase Madaxweyne Siilaanyo heshiiskii fuliyey qayb kamid ah oo ahaa furitaanka wadahadalada, waxaase uu arrimihii cuslaa ee kale isaga badbaadshey in gooni isutaaga Somaliland yahay mid Ku dhisan cod shacab, asna kursigan uu kufadhoyaa uu yahay mid Ku yimid cod shacab, islamarkaana aanu awood ulahayn hadaan shacabkii soo doortey u'idman. Hadalkaa madaxweyne Siilaanyo ayaa noqday mid uu David Cameron meel uu Ka maro waayo maadaama oo uu fahamsan yahay waxay dimoqraadiyadi tahay.
Markii dayrkii wada hadal la'aan meesha laga saarey waxaa bilaabmey isdhexgal bulsho, kaasoo ay aad udar-dar galinayeen hay'adaha samafalayaasha ee Somaliland Ka dhex shaqeeyaa. Waxaa Soomaaliya laga keenaa hay'ado fara badan oo fadhigoodu yahay Muqdisho. Waxaa labilaabey shaqaaleysiinta dhalinyarta Reer Somaliland ee Soomaaliya ama Muqdisho loo shaqo geeyo.
Hadaba markii Muuse Biixi xukunka gacanta Ku dhigey waxaa yimid isbedel aan lagaraneyn waxa uu horseedi karo. Waxaa bilaabmey buuq iyo isaseeg kasoo kasoo ulkamay xanafihii Ka dhashey doorashadii madaxtooyo. Waxaa dhacay abaaro iyo dufaano dabiiciya, duufaanadaas oo waliba lagu tiriyo in ulajeedo looga soo curiyey Badweynta Hindiya, laguna soowajahay bada Cas ( tsunamis can be caused by nuclear underwater explosion in which may have been known to surge vertically as high as 100 feet (30 meters). Most tsunamis cause the sea to rise no more than 10 feet (3 meters). The Indian Ocean tsunami caused waves as high as 30 feet (9 meters) in some places.). Hadaba warkii duufaanadaas iyo dhibkaas dhaceen ayaa hay'adihii samafalayaashu gacmaha la laabteen, tabtii ay markii hore doorasho gala ay uyidhaahdeen ay hadaba udiideen donation kii ay uqorsheeyeen taasoo Siilaanyo meel udhigey kharashka badankeedii taasoo lagu tiriyo waxyaabihii ugu mihiimsanaa we uu qabto intuu xafiiska Ku sugnaa.
Waxaa hadana sidoo kale bilaabmey dagaaladii Tukaraq oo sababtu ahayd in Somaliland Ka warheshay in Beesha Caalamku u qorshaysay in ciidamada Amisom la keeno deegaamadaas oo shidaalka lagu tuhunsan yahay, ayada oo laguna tilmaamayey dhulka lagu muransan yahay ( disputed area ). Waxaase go'aan military Somaliland Ku gaadhey iney degto ooy fadhiisimo Ka dhigato. Marka laga yimaado dagaal kii 1977 Soomaaliya iyo Itoobiya, waxa uu ahaa kii labaad ee goob kaliya sidaa loogu dagaalamo. Waxaa dagaaladaas kasoo qayb galay badiba ciidamada Somaliland oo ay kunjiraan kuwa gaarka u'tobobaran iyo ciidamadii Soomaaliya ee Maraykanku u'tobobaray ee loo yaqaan Danab, Ciidamada Daraawiishta ee Punland oo ay Ku jiraan kuwii loo tobobarey ladagaalanka argagixisada iyo badda, ciidamo laga soo urrurshey maamul goboleedyada iyo qaar kamida ciidamada Liyu Police ee Kilirka shanaad.
Waxay dagaaladani dhaceen maalintii xuskii 18 May 2018, waxaa sidoo kale ay dhaceen labo jeer oo Safiirka Mareykanku yimid Puntand, una soo dhaafey Somaliland, asaga oo sheegey in xabad joonin ay qaateen labada dhinacba laakiin markuu Somaliland Ka duuley Punland weerarka soo qaadey, islamarkaana waxba aanu Ka odhan axdi jabinta ay Punland Ku kacday, dhacdooyinkaa ayaa umuuqday shirqool dagaal oo Safiirka US ee Soomaaliya iyo Mickeal Keating oo ahaa xoghayihii guud ee UN umatalayey Soomaaliya ay Ka shaqaynayeen. Hadaba isla wakhtigaa ayaa waxaa bilaabmey wufuud fara badan oo kasocda Beesha Caalamka iyo African Union Ka oo Muuse Biixi ugu baaqay inuu ciidamada dib uga qaado Tukaraq laakiinse uu kadiidey, asaga oo ku qanciyey iney ciidamadu Ku sugan yihiin Somaliland gudaheeda.
Hadaba aniga oo jecel inaan qoraalkeyga soo gunaanado ayaa waxay hada Somaliland wajahday waji kale oo ah in gudaheeda laga abuuro qaybsanaan u dhisan fikir Ku Kala duwanaansho ah in Somaliland lawada leeyahay iyo inaaney ahayn Somaliland mid aan lawada lahayn.
Waxaa isweydiin mudan in dadkii labideyey aqoonta, inaga oo aaminsan in aqoontu dawo utahay juhalka, marka laga hadlayo juhal ama casri-juhalka ayaa waxaa loo nusbeeyo wakhtigii Carabi qabaa'ilka isku dileysan intaaney Diinta Islaamku mideyn amase wakhti qabyaalad laysku dilo, ayaa hadaba labadan Professor ee Maraykan inagaga yimid ku tabliiqeeyaan fikir kasoo horjeeda Title ka ay sitaan.
Waxaa Carabtii dagaalka isdilka dhexdoodu dhaqanka u ahaa kasaaray juhalkii haystey ayaa ahayd diinta Islaamka, weyney Ku midoobeen ilaa ay xadaaradihii Ka waaweynaa utaliyaan.
Waxaa hadaba sidoo kale Somaliland burburkii Soomaaliya Ku dhacay ay kaga soo kabatey markey isu fahmeen in Qaran ay Ku badashaan qabiilka ay isu dilayaan. Taasi waxay dhashey in go'aankaa la qaatey uu maalin Ku asteysnaado, taasina noqoto maalinta 18 May oo u dhigan maalin qaran, kuna fadhida badbaado ummadeed.
Hadaba hadii 18 May lawaayo, waxay Ka dhigan tahay qaranimadii oo la waayey, hadiise qaranka Somaliland lawaayo waxaa meesheedii buuxinayaa sow qabiil ma'aha. Hadaynu xataa qaadano habkaa qabaa'ilka ee bilaa qaranka ah, ma kala badbaadaynaa, maxayse taariikhdii aan qabyaalada kasoo baraney ee qaranimadii Soomaaliya dumisey hada kaga duwanaan kartaa ?
Runtu waxay tahay waa tii oo waliba kasii xun, ninka Soomaaliya usii hanqal-taageyaa waxaa Ka maqan xisaab badan oo ah in Soomaaliya toos loo haysto, diid ama hadiidin, waase xaqiiq jirta. Waxaana hubaala in cida Soomaaliya haysataa ay tahay cida diidan in Somaliland la ictiraafo, taasoo ladiidan yahay horrumarka Somaliland sameysaa inuu noqon doono mid gumeystaha Soomaaliya fadhiyaa Ka saari doonta, sidii horeyba udhacday ee beerihii Talyaanigu haystey dadkii aqoonta lahaa ee Somaliland British Protectorate Ka tagey ugu soo cesheen gacmaha Soomaaliyeed, ayaga oo yaab ay Ku noqotey in hanti shaqsi oo Soomaaliyeed gumeyste haysto.
Waxaa xaqiiq ah in ololaha siyaasiga ee Somaliland lagu burburinayaa ku saleysansan yahay turjumaad khaldan oo ah in Somaliland aan lawada lahayn, dawladuna tahay ta dulmiga wada, kadibna dawlada la rido, islamarkaana ay halkaas kabilaabanto bur-bur kii loo gol'lahaa ee dariiqa dheer cadawgu usoo maray. Waxaa xaqiiq ah in dadka loo isticmaalayaa ay yihiin dadkaa aqoonta leh een marka horeyba aaminsaneyn jiritaanka Somaliland iyo dhalinyaro barbaartey dagaaladaa dabadood oon aqoon ulahayn khasaaraha Ka dhasha dal iyo ummad burburta. Hadaba aniga oo halkan ka ilaashay xoggaha xaqaaqiga ah ee jira, kuna saabsan dagaalka Somaliland Ku socda, ayaa ereygeyga udambeeyaa yahay digtooni in lagalo oo nabadana aad loo ilaashado.